हङकङमा त्यस्तो दुर्व्यवहार दोहोरिनु हुन्नँ - हङकङ - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपालखबर | असोज २९
मन्त्री लाउ (दायाँ) सँग तर्क गर्दै तामाङ (बीचमा)
टोपराज वा अरु कोही पनि व्यक्ति विरुद्ध माहोल बनाउने गरी पूर्वाग्रह राखेर लेख्ने नेपालखबरको नीति छैन। सार्वजनिक सञ्चार संस्था व्यक्तिगत ईर्ष्या वा असन्तुष्टी साँध्न कसैमाथि प्रहार गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी प्रतिवद्ध छौं।
हङकङमा २० सेप्टेम्बर (४ असोज) मा आयोजना गरिएको नेपालको नेशनल डे विशेष समारोहमा निम्त्याइएका प्रमुख अतिथि हङकङ सरकारका मन्त्री जेम्स हेनरी लाउमाथि भएको दुर्व्यवहार र त्यसमाथि हङकङ सरकारले गरेको छानबिन सम्बन्धमा नेपालखबरले १५ असोजमा प्रकाशित गरेको समाचारमा केही प्रतिक्रिया आएका छन्।
कुटनीतिक समारोहमा भएको दुर्व्यवहारमाथिको छानबिनबारे व्यवसायिक सञ्चार माध्यममा आएको त्यो पहिलो समाचार थियो, जसमाथि बहस हुनु र प्रतिक्रियाहरू आउनु स्वाभाविक हो। तर त्यो समाचारको सत्यता र प्रस्तुतिको विषय उठाएर सामाजिक सञ्जालमा केही भ्रम छर्ने प्रयास समेत भइरहेकाले थप प्रष्ट गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले हुङहोमस्थित हार्बर ग्राण्ड होटलमा आयोजना गरेको नेशनल डे समारोहमा नेपालखबर हङकङका संवाददाता उपस्थित भएपनि दुर्व्यवहारको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हामी थिएनौं। प्रत्यक्षदर्शी भएको भए वा तत्कालै त्यो घटनाबारे जानकारी पाएको भए हामी त्यसैबेला नै त्यो समाचार संम्प्रेषण गर्ने थियौं र त्यो प्रकरणको फलोअप पनि गर्ने थियौं। त्यो घटनाबारे थाहा नभएपछि हामीले त्यसबेला स्वाभाविक रुपमा कार्यक्रमको सामाचार मात्र दियौं।
नेशनल डे जस्तो कुटनीतिक समारोहमा प्रमुख अतिथिमाथि जुन दुर्व्यवहार भयो त्यो समाचारको विषय हो। हामीले दश दिनपछि मात्रै त्यो समाचार लेख्न सक्यौं, जब नेशनल डे समारोहमा प्रमुख अतिथि लाउमाथि दुर्व्यवहार गर्ने टोपराज तामाङबारे हङकङ प्रहरी सहितका विभागले पत्र पठाएर महावाणिज्य दूतावाससँग सोधपुछ गरेको सूचना हामीले पायौं।
हेर्नुस् उक्त खबरः नेपाली दूतावासलाई हङकङ सरकारको पत्र, मन्त्री लाउमाथि दुर्व्यवहार गर्ने तामाङबारे सोधपुछ
जुन दिन हामीले त्यो सामाचार प्रकाशित गर्यौं, त्यो दिन, त्यसअघि र त्यसपछि पनि महावाणिज्य दूतावासले ‘टोपराज तामाङबारे हङकङ सरकारले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा सोधपुछ गरिरहेको’ भन्दै त्यसबारे के गर्ने भनेर हङकङका नेपाली संघसंस्थाका अगुवाहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेको थियो। ‘हङकङ प्रहरीले होटलमा दुर्व्यवहार भएको सिसि क्यामेराको भिडियो सहित टोपराजबारे सोधपुछ गरेपछि’ नेपाली अगुवाहरूसँग छलफल गरेको दूतावासले बताइरहेको छ। र, त्यो घटनापछि टोपराजलाई प्रहरीले गरेको सोधपुछले हङकङ सरकार घटनाको छानबिन गरिरहेको थियो भन्ने थप पुष्टी भएको छ।
नेपालखबरले हङकङ सरकारले दूतावासलाई पत्र पठाएर औपचारिक अनौपचारिक सोधपुछ गरेको दूतावासका अधिकारीकै भनाई समाचारमा राखेको छ। दूतावासका अधिकारी मात्र होइन, त्यो समाचारमा घटनाको प्रत्यक्षदर्शी एनआरएनए हङकङकी अध्यक्ष टीका गुरुङ र स्वयं टोपराज तामाङलाई पनि उद्धृत गरिएको छ। घटनाको दुई दिनपछि आफ्नो फेशबुक पेजमा टोपराजले पोष्ट गरेको भिडियो लिंक समेत राखेर हामीले उनलाई उद्धृत गरेका छौं।
हङकङ सरकारले त्यो घटनाबारे के कसरी सोधपुछ गरिरहेको छ भनेर भन्न सक्ने आधिकारिक निकाय दूतावास बाहेक अर्को हुन सक्दैन। दूतावासका अधिकारीले यसरी सोधपुछ भइरहेको छ भनेर आधिकारिक रुपमा भनेपछि ‘कुटनीतिक पत्र पनि देखाउनै पर्छ’ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं। किनकी त्यो कुटनीतिक गोप्यताको विषय पनि हो र, सबैकुरा हामीलाई देखाउन मिल्ने नमिल्ने वा सार्वजनिक गर्न मिल्ने नमिल्ने दूतावासले जान्ने विषय हो।
त्यो घटनाबारे नेपालखबरमा जसरी समाचार आयो, त्यो भन्दा सन्तुलित समाचार अरु हुन सक्दैनथ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हुन सक्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यस्तो ‘सन्तुलित समाचार’ पढ्न हामी पनि उत्सुक छौं।
कुनै पनि समाचार तयार गर्दा तथ्य नजिक पुग्ने र त्यसलाई सकेसम्म सन्तुलित रुपमा प्रस्तुत गर्ने नेपालखबरको सम्पादकीय नीति हो। र, हङकङको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यही गर्दै आएका छौं। नेपालखबरमा प्रकाशित सबै समाचारको विश्वसनीयताको जिम्मेवारी यसका संवाददाताहरू सहितको सम्पादकीय टिमले लिन्छ, चाहे त्यो समाचार जोसुकै संवाददाताले लेखेको होस्। व्यवसायिक सञ्चार गृहमा सामान्यतः संवाददाताले तयार पारेको समाचार सम्पादनको एउटा प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रकाशित हुन्छ र, नेपालखबरमा पनि त्यही भइरहेको छ।
दर्जनौं देशका हङकङस्थित कुटनीतिक अधिकारीहरूलाई समेत निम्त्याइएको नेशनल डे जस्तो समारोहमा जुट घटना भयो, त्यो दुखद थियो। ‘पाहुनालाई सम्मान गर्ने’ नेपाली संस्कृति विपरित त्यो घटनाले नेपालको कुटनीतिक मिसन र हङकङको नेपाली समुदायलाई लज्जित तुल्याएको छ। एनआरएनए हङकङकी अध्यक्ष टीका गुरुङ समेतको पहलमा ठूलो रुप लिनुअघि नै घटना साम्य बनाउने जुन प्रयास भयो, त्यो घटनास्थलमा छिटो चालिएको सही कदम थियो। जसले गर्दा कार्यक्रम बिथोलिन पाएन, नेपाल र हङकङका नेपालीको इज्जत जोगियो।
टोपराज तामाङले फेशबुकमा पोष्ट गरेको भिडियो र हाम्रो समाचारमाथि गरेको टिप्पणी अनुसार उनले आफुले त्यसो गर्नुमा मुख्यतः दुई वटा कारण दिएका छन्। पहिलो, उनले नेपाल सरकारले हङकङमा जनजाति समुदायको व्यक्तिलाई महावाणिज्यदूत नबनाएको विषय उठाएका छन्। जुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले एक दशकदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो। दोस्रो, तामाङले हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले सेवा शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको नीति वा दूतावासप्रति तामाङले असन्तुष्टी राख्न पाउँछन्। तर जुन ठाउँमा जसरी उनले आफ्नो असन्तुष्टी पोख्न खोजे त्यो गलत थियो। पहिलो, हङकङमा कसलाई महावाणिज्यदूत बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने नेपाल सरकारले हो। हङकङ सरकारका लागि यो सरोकारको विषय होइन र उसले नेपाल सरकारलाई यसबारे केही भन्न पनि सक्दैन। संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा जसले जनजाति महावाणिज्यदूतको माग गरिरहेका छन्, त्यो नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित विषय हो। अझ् त्यो हङकङमा भन्दा पनि काठमाडौंमै गएर पहल गर्नु पर्ने विषय हो। त्यसैले प्रमुख अतिथिका रुपमा छोटो समय कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका हङकङ सरकारका मन्त्रीलाई कुटनीतिक समारोहमा एकान्त पारेर यो विषयमा पटक पटक जर्बजस्ती सुन्न बाध्य पारिनु उचित होइन। दोस्रो, दूतावासले सेवा शुल्क बढाएको वा तामाङले भनेजस्तो काम नगरिदिएको हुनसक्छ। अनि के त्यो असन्तुष्टी पोख्ने हङकङ सरकारका मन्त्रीमाथि हो? लाउले त्यो समस्याको समाधान दिन सक्छन्?
टोपराज तामाङ र उनले उठाएका मुद्दाप्रति नेपालखबरको कुनै पूर्वाग्रह छैन। सँगसँगै गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न पनि हामी सक्दैनौं। कतिपय सन्दर्भमा हामीले नै त्यस्ता मुद्दा उठाउने वा उठाउनेहरूप्रति सदाशय राखेर समाचार प्रकाशित गरेका छौं। नेपालखबर सुरु हुनुअघि विभिन्न सञ्चार माध्यममा रहँदा पनि हङकङका जनजातिले आफनै समुदायका व्यक्ति महावाणिज्यदूत देख्न चाहेको हामीले लेख्दै आएकै हौं। त्यसक्रममा हामीले हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका कमजोरीबारे लेख्दै आएका छौं। महावाणिज्य दूतावासका सिमा र कमजोरी थुप्रै होलान र, ती विषय उठाउने फोरम अरु पनि छन्।
टोपराज वा अरु कोही पनि व्यक्ति विरुद्ध माहोल बनाउने गरी पूर्वाग्रह राखेर लेख्ने नेपालखबरको नीति छैन। सार्वजनिक सञ्चार संस्था व्यक्तिगत ईर्ष्या वा असन्तुष्टी साँध्न तथ्य प्रमाण बाहिर गएर कसैमाथि प्रहार गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी प्रतिवद्ध छौं। यही मान्यतामा रहेर समाचार प्रकाशित गर्ने क्रममा विगतमा नेपालखबर हङकङका सम्पादकमाथि आक्रमणको प्रयास समेत भएको छ। नेपालखबर डटकम र यसको हङकङ संस्करण व्यवसायिक पत्रकारहरूको टिमले सञ्चालन गर्ने लोकप्रिय अनलाइन हो। समाचारलाई आधार बनाएर हुने भौतिक आक्रमण प्रयास वा सामाजिक सञ्जाल र अन्य तरिकाबाट गरिने प्रहारबाट हामी विचलित हुँदैनौं।
नेपालखबरमा प्रकाशित समाचारमा कुनै गल्ती भेटिए त्यसबारे हामीलाई जानकारी गराउने वा सच्याउन आग्रह गर्ने बाटो सधैँ खुला छ। सुझाव र प्रतिक्रियालाई स्वागत गर्दै आफुलाई परिमार्जन गर्न हामी सधैँ तत्पर छौँ।
हङकङमा स्थापित एउटा व्यावसायिक अनलाइन पत्रिकाको रुपमा नेपालखबरको उद्देश्य हङकङको नेपाली समुदायलाई एकीकृत बनाउनु, र नेपाली तथा अन्य समुदायबीच हार्दिकता विकास गर्नु हो। कसैको मर्यादामाथि प्रहार नगरी वा कसैसँग गलत सम्झौता नगरी त्यस्तो एकता निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।
हामी फेरि पनि भन्छौं– नेशनल डे समारोहका प्रमुख अतिथिमाथि हङकङमा जुन दुर्व्यवहारको घटना भयो त्यस्तो घटना अब दोहोरिनु हुँदैन। आफ्ना असहमती, असन्तुष्टी र एजेण्डा ठिक ठाउँमा, सही तरिकाले राख्न सक्यौं भने ढिलो चाँडो परिणाम निस्कन्छ।
अरुको मर्यादा राख्न सके आफ्नो प्रतिष्ठा झन् बढ्छ।
प्रकाशित २९ असोज २०७५, सोमबार | 2018-10-15 17:13:45
क्याथे प्यासिफिक एयरवेजका यात्रु सहयोगीहरु नै चोरीमा संलग्न
हङकङको प्रतिष्ठित एयरलाइन्स क्याथे प्यासिफिक एयरवेजका यात्रु सहयोगी सदस्यहरु नै चोरीमा संलग्न भएको खुलासा भएको छ।
न्यूयोर्क–टोकियोलाई पछि पार्दै हङकङ–मकाउ–ग्वान्झाओ क्षेत्र
ग्वानडोङ–हङकङ–मकाउ ग्रेटर बे सम्बन्धी यी १० तथ्य, जसबाट चीन अमेरिकाका सान फ्रान्सिस्को र न्यूयोर्क तथा जापानको टोकियोलाई चुनौती दिँदैछ।
एनआरएनए मकाउकी अध्यक्ष अधिकारीले जितीन करातेमा पदक
प्रदेश ५ मा जारी आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत करातेको कुमुतेमा गैर आवासीय नेपाली संघ मकाउबाट सहभागी शान्तीदेवी अधिकारीले काँस्य पदक जितेकी छन्।
हङकङमा पाँच बस एकआपसमा ठोक्किए
हङकङमा पाँच वटा बस एकआपसमा ठोक्किँदा २० यात्रु घाइते भएका छन्।
हङकङमा नयाँ मर्सिडिज बेन्ज ब्रान्ड सेन्टर खुल्यो
हङकङमा विश्वस्तरीय कार ब्रान्ड सेन्टर खुलेको छ।
हङकङ, बैशाख ८ - हङकङमा पाँच वटा बस एकआपसमा ठोक्किँदा २० यात्रु घाइते भएका छन्।